एसिया कप फुटबलको उपाधि कतारलाई – tvNepali.net
एसिया कप फुटबलको उपाधि कतारलाई
एसिया कप फुटबलको उपाधि कतारले जितेको छ । दुबईको अबुधाबीस्थित जयाद स्पोर्टस सिटी मैदानमा भएको उपाधि भिडन्तमा कतारले सर्वाधिक विजेता टोली जापानलाई ३–१ ले हराउँदै उपाधि जितेको हो ।
कतारलाई पहिलोपटक यस प्रतियोगिताको उपाधि जिताउन अल्मोज अली, अब्दुल्लाज हतेम र अक्रम अफिजले समान एक–एक गोल गरे । खेलमा अल्मोजले खेलको १२ औं मिनेटमा गोल गरेका थिए भने अब्दुल्लाजले २७ औं मिनेटमा गोल गर्दै कतारलाई पहिलो हाफमा २–० को अग्रता दिलाएका थिए ।
पहिलो हाफ २–० ले पछि परेको जापानले खेलको ६९ औं मिनेटमा गोल गरेको थियो । उसका लागि तकुमी मिनामिनोले गोल गर्दै २–१ को स्थिति बनाए । तर, खेलको ८३ औं मिनेटमा अक्रमले पेनाल्टीबाट गोल गरी कतारलाई ३–१ को जित दिलाए ।
यससँगै कतारले पहिलोपटक यस प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको छ । उसले पहिलो एशियन कप जितेर इतिहास बनाएको छ । यससँगै कतारले अर्को एउटा रेकर्ड बनाएको छ । ऊ जारी प्रतियोगितामा गोल नखाइकन प्रतियोगिता जित्ने टोली बनेको छ ।
एसिया कप फुटबलकतारजापानदुबईको अबुधाबी
PreviousPrevious post:बखत र प्रतीभा पछी भाइरल बनेका बिष्णु र सपनाको घर बन्दै ‘भिडियो’
Next Next post:चर्चित गायिका मेलिना राईको ‘कोहि राम्रो रुपले ’ बोलको गीतमा विनाले यसरि देखाइन आफनो रुप ! भिडियो सहित
किन आउँदैछन् जापानी विदेशमन्त्री आज नेपाल ?
दुई लडाकु विमान आपसमा ठोक्किदा भयो दुर्घटना , ६ सैनिक वेपत्ता
तलब नदिदा कतारमा एक नेपालीले गरे आत्माहत्या